रोचक – Contemporary News Portal From Nepal
कुश्मा, २ असोज (रासस) : एक्काइसौँँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि वास्तविकता सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर अचम्म नमान्नुहोस्, जलजला ८ (साविक नाग्लीवाङ ७) शालिग्रामधामस्थित गाउँमा आजसम्म पनि तामसी भोजन गरिँदैन । मासु बिनाको भोजन नै नहुने वर्तमान समयमा सात्विक भोजन गर्ने गाउँ फेला पार्न कठिन भएपनि शालिग्रामधामका ४५ घरधुरीले भने अहिलेसम्म सात्विक..
- करुणा कुँवर म २७ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । मेरो विवाह भएको ३ वर्ष भयो । आपसी सल्लाहअनुसार नै हामीले अहिलेसम्म सन्तान जन्माएका छैनौं । यौनसम्पर्कको धेरैजसो समयमा मलाई सन्तुष्टिको अनुभूति नभएको महसुस हुन्छ भने मेरा श्रीमान्ले भने सन्तुष्टि महसुस गर्नुहुन्न । यौन सन्तुष्टिका लागि फोर प्ले आवश्यक हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर श्रीमान्सँग यो..
एजेन्सी-भारतमा राष्ट्र पिताका रुपमा मानिएका साथै सारा भारत वर्षले ‘बापू’ भनेर पूजा गरेका महात्मा गान्धीबारे विभिन्न किस्साहरुपनि उतिकै छन् । इतिहासमा उल्लेख घटनाक्रम अनुसार अहिंसाको आन्दोलन चलाएर विशाल बेलायतको उपनिवेशलाई भारतबाट खेदाउने श्रेय पाएका गान्धीको एक वास्तविक्ता निम्नअनुसारका छन् । सन् १९०६ मा जब गान्धीले ब्रम्हचार्य..
काठमाडौं, २५ बैशाख । विश्वमा कुन देशको तागत कति छ भन्ने कुरा उसंग रहेका सैनिक र हात हतियारलाई लिएर गरिन्छ ।यसको अर्थ जुन देशसंग सबैभन्दा बढी सैनिक र अत्याधुनिक हात हतियर हुन्छ त्यो देश टबलियो मानिन्छ । देशको सुरक्षाको लागि सैन्य शक्तिलाई एकदमै महत्वका साथ हेरिएको हुन्छ ।बिश्वमा केही यस्ता देश पनि छन् जसको आफ्नै सेना छैन । कोहीका..
इष्ट पोल स्कुलमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास : मतदान गरेर विद्यार्थीले छानेे क्याप्टेन
सुदर्शन बजगाई,काठमाडौं । बैशाख २५ गते चकिलो घाम थियो र विद्यार्थी उत्साहित थिए । उनीहरुको मनमा विस्वास थियो र परिवर्तन चाहन्थे ती विद्यार्थी । ताम झामका साथ मतपेटिका तयार गरिएको थियो र मतपत्र तयार थियो । विद्यार्थी लामबद्ध थिए र दृश्य हेर्दा कुनै स्थानीय तहको निर्वाचन होकी भन्ने लाग्दथियो तर निर्वाचन थियो इस्टपोल स्कुलको स्कुल र हाउस..
मेरो एउटा साथी छ । ऊ युएईमा छ । हामी एक–अर्कालाई चाहन्छौं । ऊ केही दिनपछि नेपाल आउँदैछ । ऊ मसँग यौनसम्पर्क राख्ने कुरा गर्छ, तर ममा त्यस्तो चाहना छैन, म के गरूँ ? डा. राजेन्द्र भद्रा, साथीसँगको सम्बन्ध तपाईंले आफ्नो युएईमा भएको साथीको सन्दर्भमा एक–अर्कालाई चाहने कुरा भन्नुभएको छ, तर तपाईंले आफ्नो र साथीको उमेर उल्लेख गर्नुभएको छैन ।..
यी हुन् ६३ वर्षदेखि ननुहाएका विश्वकै फोहोरी व्यक्ति, जसले मरेको सिनो खान्छन् (भिडियो सहित)
तपाईहरुका लागि फेरी एउटा अचम्मको खबर लिएको उपस्थित भएका छौं । सोच्नुहोस मानिस कति दिन ननुहाईकन बस्न सक्दछ । एक हफ्ता, एक महिना यस्तै । तर यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिएको समाचारमा एक व्यक्तिले ६३वर्ष देखी नुहाएका छैनन् । यो समाचार हो ईरानको..
म २८ वर्षकी भएँ । विवाह भएको चार वर्ष भयो । हाम्रो एउटा छोरा छ । यौनसम्पर्क गर्दा श्रीमान्ले जब वीर्य योनिमै झार्नु हुन्छ तब लिङ्ग बाहिर निकाल्दा सबै वीर्य बाहिरै आउँछ, किन होला ? अनि म साह्रै पातली छु । परिवार नियोजन गरेमा वा श्रीमान्ले योनिमा झारेको वीर्य बाहिर नआए मोटाइन्छ रे, के यो सत्य हो ? -४३४५ गर्भनिरोधक उपाय जस्तै कि कन्डम..
नेपालमा टिन्डर ट्रेन्ड: डेटिङको बहानामा सेक्स
हिजोआज न्यास्रो मेट्न सामाजिक सञ्जाल नै काफी छन् । उमेरदारले पार्टनर खोज्न मेला धाउनबाट मुक्ति पाएको वर्षौं भइसक्यो । हुँदाहुँदा अब मनसँगै तनको प्यास मेटाउनसमेत सामाजिक सञ्जाल सारथि बनिरहेका छन् । यही सेरोफेरोमा नेपालका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ चढेको डेटिङ एप ‘टिन्डर’को बढ्दो ज्वरो र त्यसले निम्त्याएका सुखद्–दुःखद् पलबारे..
- डा. राजेन्द्र भद्रा-म २१ वर्षीय युवा हुँ । मेरो लिंग उत्तेजित हुँदैन । मैल दुई–तीन पटक यौनसम्पर्क गर्ने प्रयास गरें, तर लिंग उत्तेजित नभएका कारण सम्पर्क राख्न सकिनँ । यो समस्या सिर्जना भएको करिब दुई वर्ष भयो । यसको केही उपचार छ कि ? - ३८२८ लिंग कसरी उत्तेजित हुन्छ ? लिंग उत्तेजित हुन व्यक्ति पनि यौन उत्तेजित हुनुपर्छ । यौनेच्छा जाग्ने..